ကျနော်ချစ်သော နိုင်ငံခြားသားတဦး၏ဇနီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ကျနော်ချစ်သော နိုင်ငံခြားသားတဦး၏ဇနီး
Posted by Good Idea on Nov 19, 2010 in Aung San/Aung San Suu Kyi | 19 comments
search 123 ရေးထားတဲ့စာက နအဖ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ သူတို့ ဘက်တော်သားတွေ ဒေါ်စုကို အမြဲနှိမ့်ချ နာမည်ဖျက်နေတဲ့ လက်သုံးစကား ဖြစ်နေတယ်ဗျ။
ကုလားဖြူမယား။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို မချစ်လို့မှ နိုင်ငံခြားသား ယူထားတယ်။ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ကောင်းစေချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့လင်အမျိုး အင်္ဂလိပ်တွေ ကောင်းစားဖို့လုပ်နေတာ။ တိုင်းပြည်အာဏာရသွားရင် သူ့လင်အမျိုး အင်္ဂလိပ်တွေကို တိုင်းပြည်ထိုးအပ်လိုက်ပြီးဟိုက ကြိုက်သလို ကြိုးကိုင် ချယ်လှယ်မှာ။ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့လက်သစ်တွေ ဘာညာပေါ့လေ။ နအဖက ဒေါ်စုကို အမြဲတမ်း အဲ့လို ပြောနေခဲ့တာပါ။
ကျနော်ပြောတာ ဟုတ်သလား မဟုတ်သလား မိတ်ဆွေများ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
တကယ်တော့ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်နိုင်ငံသားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးကို တကယ်ထောက်ခံပြီး စေတနာကောင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရင် ကျနော်တို့ ကြိုဆိုရမှာ။ ထောက်ခံအားပေးရမှာပါ။ ဒါက ကမ္ဘာနဲ့ချီ ပြောတာနော်။
မြန်မာအတွက် ပြောရရင်တော့ မြန်မာဖြစ်ပေမယ့် တခြားနိုင်ငံသားနဲ့ ညားတယ်။ (ဒါက အမျိုးဂုဏ် မစောင့်ဘူးလို့ အပြစ်ဆိုချင် ဆိုနိုင်တယ်)။ သို့သော် အဲဒီလို တိုင်းတပါးသားနဲ့ ညားပေမယ့်လည်း မြန်မာပြည်ကောင်းဖို့၊ တိုးတက်ဖို့၊ ကြီးပွားချမ်းသာဖို့၊ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ လူမှုဘဝတွေ မြင့်မားဖို့ လုပ်ဆောင်နေသူအတွက်တော့ ဒါက ပြောပလောက်တဲ့ အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ရာဇဝင်မှာထင်ရှားတဲ့ ကျမ်းတတ်ဆရာတော်ကြီးတပါးရဲ့ ဥပမာကို ခဏငှားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားဟာ ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက် ၄၅ ဝါပတ်လုံး မနားမနေပဲ ၃၁ ဘုံသား ဝေနေယျ သတ္တဝါအားလုံး သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲက လွတ်မြောက်ပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းတရားဟောခဲ့တာကို ထောက်ရှုလိုက်ရင် အလောင်းတော်ဘဝမှာ မိန်းမပေါင်းများစွာနဲ့ ကာမဂုဏ်အရသာ အကြိမ်ကြိမ် ခံစားခဲ့တဲ့ကိစ္စက ဘာမှပြောပလောက်တဲ့အပြစ် မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
နောက်ဥပမာတခုက ဒေါ်စုကို ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့ နှမလေးလို သဘောထားလိုက်ရင် ကျုပ်တို့နှမကို ယူထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကျုပ်တို့ယောက်ဖက နှမလေးကို ချစ်တယ်။ ကြင်နာယုယတယ်။ လင့်ဝတ္တရားကျေတယ်။ ဂရုစိုက်တယ်။ နားလည်မှုပေးတယ်။ ကောင်းကောင်းလည်း လုပ်ကျွေးတယ်။ သားသမီးကိုလည်း ဂရုစိုက်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ လူမျိုးမတူတာကလွဲလို့ ကျန်တာက ဘာအပြစ်မှ မရှိတဲ့ သူ့ယောက်ျားကို ကျုပ်တို့က အမျိုးအဖြစ် မသတ်မှတ်တော့ဘူးလား။ မပေါင်းသင်း မဆက်ဆံတော့ဘူးလား။ ဒါက ဆွေမျိုးအဖြစ်နဲ့ ဥပမာပေးတာပါ။
ကျနော်ကတော့ မြန်မာ မိဘကမွေး မြန်မာအချင်းချင်းယူ မြန်မာသားသမီးတွေမွေးပြီး အမျိုးဂုဏ်စောင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက မြန်မာပြည်ကို ကောင်းကျိုးမပေးဘဲ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အမွဲဆုံး၊ အနိမ့်ကျဆုံး၊ သိက္ခာမရှိဆုံး တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာထက်စာရင်တော့ မြန်မာအချင်းချင်း ယူမထား၊ မြန်မာချင်း မညားသော်လည်း တိုင်းပြည်အရေးကို မိသားစုအရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အသက်အန္တရာယ်ဘေးတွေထက် ပိုဦးစားပေးပြီး အလုပ်လုပ်နေသူ ကြိုးစားနေသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပိုလေးစားတယ်။ ပိုချစ်တယ်။ ပိုမြတ်နိုးတယ်။ ပိုလို့ပင် တန်ဖိုးထားတယ်ဗျာ။
ကဲ ခင်ဗျား ဘာပြောချင်သေးလဲ…။
Yes I do agree with words for Daw Su.
ဟိုမျောက်မသား နွားဦးနှောက်နဲ့ အမိန့်ပေးရင်း ချေးတောင် အန်ထွက်အောင်စားမဲ့ search123 ဆိုတဲ့ သတ္တဝါ post ကိုဖတ်ရတာ တော်တော်ကို စိတ်နောက်တယ်။
သူအဖေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရှိနေခဲ့ရင် သူမကို ဘာလုပ်မယ်ထင်သလဲ။
ငါတိုူ့လူမျိုးကို ကျွန်ပြုခဲ့တဲ့ လူမျိုး၊ ငါ့ကိုသတ်တဲ့ လူမျိုးကိုမှ ယူရမလား ဆိုြ့ပီး ရိုက်သတ် လိမ်.မယ်။
နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအကျိုးဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ပြီပြီလဲ။ ဖေါ်ပြပေးပါ။ပိတ်ဆို့ရေးတွေလုပ်နေတာ တိုင်းပြည်အကျိုးလား။အကြမ်းဖက် အဖွဲံအစည်းတွေနဲ့ တသားတည်း ဆက်သွယ်နေတာ အေးချမ်းသာယာရေးအတွက်
သူငယ်ချင်းပြောတဲ့စကားကို ကျနော် လက်မခံဘူးဗျ။ ဗိုလ်ချုပ်မှာရှိတာက တိုင်းပြည်ကို တိုင်းတပါးလက်အောက်က လွတ်မြောက်စေချင်တဲ့စိတ်ဗျ။ သူ့မှာ လူမျိုးစွဲမရှိဘူး။
သူသာ လူမျိုးစွဲရှိရင် ပင်လုံညီလာခံလိုမျိုးကို စဉ်းစားမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဖော်ဆောင်မယ်လည်း မထင်ဘူး။ ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ သားသမီးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက လွပ်လပ်စွာ နေထိုင်တတ်၊ တွေးခေါ်တတ်အောင် သင်ပေးထားတဲ့ ဖခင်ကောင်း တယောက်ပါ။
သမိုင်းစာအုပ်မှန်သမျှ ပြန်လှန်ကြည့်လိုက်။ သူ့သားသမီးကို တကြိမ်တခါမှ ရိုက်နှက်ဖူးတယ်ဆိုတာ မတွေ့ရဘူး။ ဒါကြောင့် ရိုက်သတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာက ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီး ပြောမိတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တော့ အဲ့လိုထင်တယ်။
အရေးယူ ပိတ်ဆို့ရေးအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ကတော့ ကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းဖက်က ပြည်သူလူထုနစ်နာရတဲ့ အချက်အလက်တွေ တင်ပြနိုင်ရင် ကျနော်ဆွေးနွေးမယ်။
ဒေါ်စုက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်အဖွဲ့တွေ ပါလိမ့်နော်။ သိချင်လို့ ပြောပြပါဦး။ အထက်က သူငယ်ချင်းပြောတဲ့ အသုံးအနှုန်းက နအဖ စစ်အစိုးရ သုံးနှုန်းနေတဲ့ စကားနဲ့ တထပ်တည်း ဖြစ်နေတာတော့ နည်းနည်းထူးဆန်းနေတယ် ထင်မိသဗျ။
အဆင့်ရှိတဲ့ media တိုင်းမှာ ဒေါ်စုက ပိတ်ဆို့ရေးလုပ်ပါလို့ ဘယ်သူကမှ မရေးခဲ့ပါဘူး။ နွားခြေရာခွက်ထဲမှာ ရေးတဲ့စာကို ဖတ်မိ၊ ဖတ်နိုင်တဲ့ သူတွေကသာ အဲ့ဒီလိုအတွေးအရေးတွေသာ ရှိလိမ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ရတာ ခက်တာက အခုကွန်မင့်တွေမှာကြည့်ရင်လည်း ဖြုတ်ဦးနှောက်တွေ (ယဉ်ကျေးအောင်ပြောပါတယ်) အတော်များနေတာပါပဲ အဲ…..ဖြုတ်ဦးနှောက်တွေလား ဒါမှမဟုတ် သူတို့အခါပေးတွေလားတော့မခွဲတတ်အောင်ပါပဲ အဖေဗိုလ်ချုပ်ရှိလဲ ဘာမှလုပ်မယ်မထင်ပါဘူး သူကလူတိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလက်ခံတတ်သူပဲ ပြီးတော့ ဒါယူရုံလောက်နဲ့ တိုင်းပြည်မချစ်ဘူးပြောရအောင် အမေအကျဉ်းကျခံနေတာ မိသားစုကိုစွန့်လွှတ်ပြီး လာနေတာ သူ့အကျိုးဘာပါနေလဲပြောကြပါဦး သူအခုရထားတဲ့ဆုတွေ ငွေတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားပြန်နေရင် ကျော့နေအောင်နေရုံပဲ ဘာဒုက္ခဒီလောက်ခံနေစရာရှိလို့လဲ သူဒုက္ခခံနေတာ တမျိုးသားလုံး သူ့ကျွန်ဘဝထက်ဆိုးတဲ့ လူမျိုးတူချင်းကျွန်ပြုခံရတာကလွတ်အောင်လေ တပါးကျွန်ဘဝကမကောင်းပေမယ့် ကို်ယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းကျွန်ပြုရုံတင်မက လူရှေ့သူရှေ့မရှာင်သတ်နေတာတွေ သံဃာတော်တွေသတ်သူတွေထက်စာရင်ခံရတော်ဦးမယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေဟာ ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အားကိုးရာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် good idea ရယ်
အဒါ မောင်ရင် တို့ ကိုမေးမလို့
လက်ရှိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရ က ဒီပိတ်ဆို့ မှူ့တွေ
လက်နက် ကိုင် ပြသဏာတွေ မဖြေရှင်းတတ်လောက်အောင် စောက်သုံး မကြ ဖြစ်နေပါလား
အမေစု ပေါ်မှာ ဘာလို့မူတည်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပါအုံး
ခွေးကို ရန်မူ ရိုက်လေသူ ရိုက်သူသည်ခွေး ခွေးသည် ခွေး ဆိုပြီး
ဒီတိုင်းနေတော့လည်း မချောင်ပြန်ဘူးဗျို ့
သူတို ့ရဲ ့မိန်းမလို မိန်းမရ ကောက်ကျစ်တဲ့ နည်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခါ
ကိုယ်ကလည်း သူတို ့လို အောက်တန်းကျတဲ့ဇာတ် ပြန်ခင်းရမှာကလည်းအခက်
အဓိက အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်တို ့က သူတို ့လို ကောက်ကျစ်တဲ့နည်းတွေ
မလုပ်နိုင်ကြလေတော့ ခံကြပေတော့လို့ပြောတော့လည်း ခက်ပြန်ပါရောလားနောက်တစ်ခါ
@katootpe မင်းဖတ်ဖို့ ကူးလာပေးတာ ဖေ့စ်ဘွက် ကနေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစား ရတဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီး. 1.အမေစုက ဘာdegree တွေရထားလဲ သိလား? india very famous university က နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး နဲ့ management degree ကို great horner နဲ့အောင်ခဲ့တယ့်by the way မင်းတို့ great horner ဆိုတာကြားဖူးလား? အရင်ဆုံး မင်းတို့ဘာနဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့တာလဲ? ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန်းမ anty su ရဲ့အမေဟာ india international embassitor လုပ်ခဲ့တာရောကြားဖူးလား? ပြီးတော့ အမေစု က england oxford law school က Ph.D ကို နိုင်ငံရေးသုတေသီ နဲ့ management , public demand & need thesis တွေရခဲ့တယ် 2. သူဟာ သူ့ဘာသာ UN မှာ လစာကောင်းကောင်း နဲ့ 3years လုပ်ခဲ့တယ့် ဒီလိုအရည်းအချင်း နဲ့ အလုပ်အကိုင်ဆိုတာတွေဟာ ငါတို့ မင်းတို့ တွေအိပ်မက်ထဲမှာတောင် ရဖူးလို့လား? ဒီလိုနေရင်းနဲ့ သု့လိုပဲ democracy အရေး လုပ်ဆောင်တဲ့ england နိုင်ငံသားနဲ့ရခဲ့တယ်. ဒီလိုသူတို့မိသားစုတွေ မိစုံဖစုံ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ချမ်းချမ်းသာသာ နေထှိင်ရင်း. အမေဒေါ်ကြည် ကျန်းမာရေး အတွက် myanmar ပြည်ကိုပြန်လာရင်း 88 အရေးအခင်း ဗိုလ်ချုပ်မျိုးဆက်ဆိုတော့ မျိုးချစ်စိတ်တွေထကြွလို့ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ရင်း ငြိမ်းချမ်း နိုဗယ်ဆုရခဲ့တယ်. England လိုနိုင်ငံ မျိုးမှာ စည်းစိမ်ကျကျ နေလို့ရတဲ့ဘဝမှာသားပြစ် လင်ပြစ်နဲ့ သေနတ်တွေ ကြားမှာပြည်သူတွေအကျိုး ကိုယ်ကျိုးစွှန့်တာ မဟုတ်လို့ ဘာလဲ? သားသမီးထက် လင်သားထက် မိမိဘဝထက် တှိင်းပြည်ကိုပိုချစ်လို့ အနှစ်20 အကျယ်ချုပ် ကျခဲ့ရတယ် ခုလဲ လွတ်ခါစရှိသေးတယ် အသက် 65 ဖြစ်နေတာတောင် နိုင်ငံအကျိုးကို အာဏာတ မထားပဲ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကျိုးစားနေပြန်ပြီ့မင်းတို့ကို 1လပဲ အရာအာလုံးကို ငါ ကန့်သတ်ထားမယ် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? သေလောက်အောင်မုန်းနေမှာမလွဲပဲ. 3.ခံစားချက်ဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ကျုံမှလေးနက်မှန်းသိရတာပါ့ ဒါကြောင့်ကိုယ်မလုပ်နိုင်ရင်နေပါ့ ကိတ်စတခုခု ကို အတွင်းကျကျ မသိပဲ ဒီကနေ့ကစလို့ နောင်ကိုမဝေဖန်စေချင်ဘူး့သူများနဲ့ မတူဆန့်ကျင်ဘက်လျောက်လုပ်ရင်popular ဖြစ်တယ်ဆို့တဲ့ idea တွေကို discard လုပ်နိုင်သွားရင် ဒီထက်ပို သိတ်ခါရှိသွားနိုင်တယ်. 4. မင်းတို့တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုကြည့်ရတာ အရာရာကိုလေ့လာသင်ယူမှုအားနည်း သလို. psychological view. ကကြည့်ရင် သာပေါင်းညာစား အကျင့်နဲ့ မလိုရင်မလိုသလို ပြုမူကျမဲ့ လက်ခဏာတွေ့ရတယ့် အမေစုကိုဝေဖန်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး့ စာအသွားအလာအရ စိတ်ပညာကိုအခြေခံပြီး ပြောတာပါ့ မင်းတို့လိုလူငယ်တွေကို လောကဏီတိ စာအုပ်တွေပေး ဖတ်ဖို့လိုအပ်နေပြီ. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တော့ ဒီခွေးလောက်မှ ဆောက်ဆင့်မရှိ၊ ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ကောင် search123 ဆိုတဲ့ နွားကို ဘာမှ မပြောချင်လို့ လွှတ်ထားလိုက်တာ။
ဘဘတို့ နအဖ က မဟုတ်တရုတ် လုပ်နေတာလူ တိုင်း အသိပါ။ အဲဒီ မဟုတ်တရုတ် တွေ ကို ဆန့်ကျင် ဖို့ လူတွေ အများကြီး လိုပါတယ်။ ဒေါ်စု ကအဲဒီ ဆန့်ကျင် တဲ့ ထဲကတယောက် ပါ။ ပြည်သူ လူထု ကလည်း အရင် နေဝန်း ခု ဂျိုကုပ်ကြီး တို့ လက်အောက်မှာနေရတာ ဝဋ်ကြွေး တစ်ခုလိုဖြစ် နေပါပြီ။ အဲဒီ ဝဋ်ကြွေး ကနေရုန်းထွတ် ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုလူတွေ အများကြီး လိုနေပါတယ်။ဒေါ်စု ရဲ့ တစ်ခြား လုပ် ရပ်တွေကိုကြည့်မ နေပဲ ၊ ပြည့်သူလူထု ဆန်ဒ ကို ဆောင်ရွက် နေတာ ကို ကြည့် သင့် ပါတယ်။ နအဖ တွေ ပြော သလိုဒီနိုင်ငံ ကိုနိုင် ငံခြားသား လာ အုပ် ချုပ် မယ်ဆိုတာ ဟုတ်တာ မဟုတ် တာနောက်ထား၊ ခုလောလောဆယ် တော့ လူတွေ နအဖ လက်အောက်မှာတင် ဒုက်ခ ရောက် နေ တာ ဆိုတော့ …..ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုလူ တွေရှိနေမှကို ဖြစ်မှာ ပါ။ ( ဒါကျနော့ အမြင်ပါ၊ အမှားပါရင် လဲသီးခံ ကြပါ။)
ဘာမှမပြောချင်တော့ပါဘူး Good Idea ရေ။ တကယ့် Good Idea ပါဘဲ။ ထောက်ခံပါတယ်။
မနေ့က search123 ရဲ့ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး စိတ်ရှုပ်ခဲ့ရသမျှ ဒီနေ့မှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်။
ကျေးဇူး …………. Good Idea
ဗိုလ်ချုပ်သာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေရင် ဒါမျိုးတွေတောင်ဖြစ်မလာဘူးဟေ့ မြန်မာပြည်မှာဘဲ နေရမှာမို့ မြန်မာနဲ့ ဘဲ ညားလိမ့်မယ် Search 123 နဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို ယူလို့ အပြစ်တင်နေသူတွေရေ။
ကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာက အမေပြောခဲ့စကားတစ်ခွန်းကို အရမ်းကြိုတ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နေ့တော့မပြောတော့ဘူနော် အမေကို လူတစ်ယောက်က မေးတယ် ဘာဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားသာကိုယူလိုက်တာလဲတဲ့….. အမေက ပြန်ဖြေးလိုက်တယ်လေ အမေပြောလိုက်တာ အရမ်းကိုကြိုက်တယ် ကျမနိုင်ငံခြားသားနဲ့ရတာဟာ ကျွန်မနိုင်ငံခြားမှနေလို့နိုင်ငံခြားသာနဲ့ရတာတဲ့ အမေက ကျမ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရင်ရှင်နဲ့တောင်ရနိုင်တယ်တဲ့ ကဲဗျာဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့စကားလေလဲ အမေကိုမေးတဲ့သူလဲတစ်ခါကိုပြေးကော
ကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာက အမေပြောခဲ့စကားတစ်ခွန်းကို အရမ်းကြိုတ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမေကို လူတစ်ယောက်က မေးတယ် ဘာဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားသာကိုယူလိုက်တာလဲတဲ့….. အမေက ပြန်ဖြေးလိုက်တယ်လေ အမေပြောလိုက်တာ အရမ်းကိုကြိုက်တယ် ကျမနိုင်ငံခြားသားနဲ့ရတာဟာ ကျွန်မနိုင်ငံခြားမှနေလို့နိုင်ငံခြားသာနဲ့ရတာတဲ့ အမေက ကျမ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရင်ရှင်နဲ့တောင်ရနိုင်တယ်တဲ့ ကဲဗျာဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့စကားလေလဲ အမေကိုမေးတဲ့သူလဲတစ်ခါကိုပြောကော
မင်းတို.တွေကဘယ်လိုတွေလဲ ပါးစပ်ကပြောလိုက်ရင်တော.မြန်မာပြည်ကြီးကိုချစ်တယ် မြန်မာပြည်ကြီးကိုတိုးတက်စေချင်တယ်နဲ.အခုတော.မင်းတိုချင်းတောင်မစည်းလုံးပဲနဲ.တော.မင်းတို.တွေသာသေသွားမယ်ငါတို.နိုင်ငံကြီးက ဘယ်တော.မှဒီမိုကရေစီ ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးကွ နွားကွဲရင်ကျားဆွဲတတ်သတဲ. အေးငါ ဆရာလုပ်တယ်ထင်ချင်လဲထင်ကြပေါ.ကွာ။။။။။အမေစုမှမဟုတ်ဘူးကွ ဘယ်သူပဲဖြစ်နေပလေ.စေ ငါတို.နိုင်ငံကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်သူဆိုရင်ငါတို.တွေက သူ.နောက်ကိုလိုက်ရမှာပဲ မင်းတို.ငါတို.တွေက ခေါင်းဆောင်နေရာကမနေနိုင်သေးသရွေ. တော. နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်အောင်နေကြအုံး အခုကတည်းက မင်းတို.ချင်းမစည်းလုံးရင်ငါတို.နိုင်ငံနောက်ထပ်နှစ်တစ်ရာလောက်ကျွန်ပြန်ဖြစ်နေအုံးမှာပဲ
မင်းတို.တွေအပြစ်တင်ချင်ရင်ဘယ်သူ.ကိုမှမတင်နဲ. ကနောင်မင်းသားကြီးကို ရေမြှုပ်ဗုံးမထွင်ခိုင်းတဲ. ဆရာတော်ကိုပဲအပြစ်တင်လိုက်ကြပါတော.ကွာ
Post ကော comment တွေကောဖတ်ရတာကျေနပ်တယ် အရမ်းကောင်းတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် good idea !!